Nandar Lwin, Author at Lifestyle Myanmar » Page2of 107
Author Nandar Lwin
Author : Nandar Lwin
https://lifestylemyanmar.com - 1065 Posts -0Comments
Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018
by Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018 0166
နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအကြား အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုတောင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ လက္ခဏာတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာကို မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နှလုံးတိုက်ခိုက်မှု၏ အစောပိုင်း သတိပေး လက္ခဏာတွေ ရှိတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာရင် လျစ်လျူမရှုထားသင့်ပါဘူး။ ၁။ ရင်ဘက်နာကျင်မှု ရင်ဘက်နာကျင်တဲ့အခါ
by Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018 0161
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေက နေ့တိုင်း ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပန်းနေရတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပို့ပေးတဲ့ တချို့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို လျစ်လျူရှုမိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေကို တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိတဲ့အခါ အကျိုးဆက်တွေက ပိုပြီးဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ဟာ
Celebrity General Knowledge
by Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018 052
နာမည်ကြီး brands တွေရဲ့ တည်ထောင်သူအချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုကို သာယာကြည်နူးကြသလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးများမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ နာမည်ကြီး brand တွေကို တည်ထောင်ထားပေမယ့် ပရိတ်သတ်တွေရှေ့ထွက်ရမှာကို မနှစ်သက်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သုံးနေတဲ့အရာတွေကို ဖန်တီးပေးတဲ့ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများက အထင်ကြီး အားကျစရာကောင်းတာကြောင့်
by Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018 0105
မိန်းကလေးတွေအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ မပါမဖြစ်ကတော့ အောက်ခံမိတ်ကပ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခံမိတ်ကပ်က မညီမညာဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေကို ဖုံးကွယ်ပေးပြီး မိတ်ကပ်တွေအတွက် ချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ သင့်အသားအရေပေါ်မှာ လုံးဝသဘာဝအတိုင်း ဖြစ်နေစေမယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်တစ်ခု အသုံးပြုဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အောက်ခံမိတ်ကပ် ဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်ကို
by Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018 079
ကျွန်မတို့လိုအလှအပ မြတ်နိုးတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် မျက်ကွင်းညိုတာဟာ အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုပါပဲ။ တကယ်တော့ မျက်ကွင်းညိုတာဟာ နေရောင်ခြည်နှင့် မကြာခဏ ထိတွေ့ခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ အကြည့်များခြင်း စတာတို့ကြောင့် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်လည်း မျက်ကွင်းညိုတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျက်ကွင်းညိုတာကို
ခရီးသွားတဲ့အခါ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ရှိနေသင့်တဲ့ လိုအပ်သောအရာ ၆မျိုး
by Nandar Lwin May 18, 2018 May 18, 2018 0190
ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့မိန်းကလေးအများစုဟာ အဝတ်အစားအိတ်တစ်လုံးနဲ့ လက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးတော့ အနည်းဆုံးယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ အဝတ်အစားအိတ်တစ်အိတ်ထဲမှာပဲ အလှကုန်တွေကော၊ အဝတ်အစားတွေကော စုပြုံပြီး အကုန်ထည့်တာကြောင့် တခါတလေ ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှာရင် တော်တော်နဲ့ ရှာတွေ့ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အဝတ်အစားအိတ်ထဲမှာ မွှေနှောက်ပြီး မရှာရအောင် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပစ္စည်းလေးတွေ ထည့်မလဲ? ၁။ မိတ်ကပ်အိတ် သင့်ရဲ့အချိန်တွေကို
ခြောက်သွေ့ယားယံတဲ့ အသားအရေနှင့် ခြေထောက်တွေကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေတဲ့ အလေ့အထများ
Nandar Lwin May 17, 2018 May 17, 2018
by Nandar Lwin May 17, 2018 May 17, 2018 058
အသားအရေ ခြောက်သွေ့ယားယံခြင်းနှင့် ခြေထောက်အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းက လူအများစု ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေဟာ စိုစိုပြေပြေ ရှိမနေဘဲ ခြောက်သွေ့ပြီး မည်းလာမယ်ဆိုရင်လည်း အစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ လက္ခဏာပါ။ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အသားအရေခြောက်သွေ့တဲ့အခါ Body Lotion တွေလူးပြီး ထိန်းသိမ်းပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေကို
ခေတ်ဟောင်းရှပ်အင်္ကျီလေးတွေကို ခေတ်မီဆန်းသစ်အောင် ဘယ်လိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်မလဲ?
by Nandar Lwin May 17, 2018 May 17, 2018 057
Fashion Trends တွေဟာအမြဲပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ရှိနေတတ်ပြီး တစ်ချို့သောtrendsတွေက ကြာကြာရှိတတ်ကြပေမဲ့ တစ်ချို့ကတော့ခဏလေးနဲ့ပဲ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ ခေတ်ဟောင်းက ဝတ်စုံတွေကို ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ရတာဟာ လှပမှုရှိသလို ကြည်နူးမှုကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ အရင်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ရှပ်အကျီ င်္လေးတွေ ရှိခဲ့ရင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး ဝတ်ဆင်ကြည့်ပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ ဖက်ရှင်က
ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အဆိပ်သင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ၄မျိုးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အစားထိုး ၄မျိုး
Nandar Lwin May 16, 2018 May 16, 2018
by Nandar Lwin May 16, 2018 May 16, 2018 0195
လူအများစုက ကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက်ကို စားသုံးခြင်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။ သို့သော် အစားအစာတွေချက်ပြုတ်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတစ်ချို့က အန္တရာယ်မကင်းဘူးဆိုတာ လူတိုင်းမသိကြပါဘူး။ သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း အဆိပ်သင့်လျှင် ကျန်းမာတဲ့အစားအစာကိုတောင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Bright Sideက သုတေသနပြုထားတဲ့ အန္တရာယ်အရှိဆုံး ဒယ်အိုးတွေနှင့် အစားထိုးသုံးစွဲဖို့ ဘေးကင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကို
သင်မသိသေးတဲ့ ကိုရီးယားတွေ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသုံးပြုသော ဘန်းစကား ၈ခု
Nandar Lwin May 15, 2018 May 15, 2018
by Nandar Lwin May 15, 2018 May 15, 2018 0180
ဒါတွေက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့အတွက် အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ ဝေါဟာရသတ်မှတ်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ V-Lines တို့ 11abs ဆိုတာ လူကြိုက်များတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးစုံကို ဖော်ပြဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေ တီထွင်ထားတဲ့ ဘန်းစကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ S-Line S-Line ကအရမ်းကို ရေပန်းစားပါတယ်။ S-Lineဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စာလုံး ‘S’